Akụkọ - Ndị na-ahụ maka ụlọ na-aghọ ahịa kachasị ukwuu nke Robotic nke Mgbaaka Mgbaaka
Na ngwa ngwa robotic, a na-akpọ mgbanaka mgbaaka dị ka mgbatị na-agagharị ma ọ bụ mgbatị robot. A na-eji ya ebufe ihe mgbaàmà na ike site na isi ntọala ya na njikwa njikwa aka robotic. O nwere akụkụ abụọ: otu akụkụ na-anọ ọdụ na-agbakwunye na ogwe aka robot, otu akụkụ na-agbagharị agbatị na-agbatị aka nkwekọrịta robot. Site na nkwonkwo robot, robot nwere ike nweta ntụgharị ogo 360 na-enweghị ngwụcha na-enweghị nsogbu eriri ọ bụla.
Dabere na nkọwapụta nke rọbọt, mgbanaka e ji amị amị dị ọtụtụ. Na-emekarị robot zuru ezu ga-achọ ọtụtụ mgbanaka mgbagharị robot na mgbaaka ndị a na-amị amị nwere nwere ihe dị iche iche achọrọ. Ruo ugbu a, AOOD enyelarị ọtụtụ kọntaktị mgbanaka eletrik dị iche iche na-arụ ọrụ na ngwa robotic gụnyere kọmpat capsule slịpe mgbaaka, site na mgbape slịlị mgbaaka, ihe mgbaaka pan achicha, njikọta njikọta nke fiber optic, njikọta na-agagharị electro-optic na mgbakọ ndị a na-emezi. .
Ahịa ngwa ngwa kachasị ukwuu nke mgbanaka mgbapụta bụ ahịa igwe mgbanye ụlọ kama ahịa azụmaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Dị ka ọ na-adị, ígwè ọrụ mmepụta ihe nwere ihe ndị dị elu a chọrọ nke yiri mgbaaka na gburugburu ebe ọrụ ha dị iche iche. Dị ka o siri dị, igwe na-ahụ maka ụlọ nwere ọtụtụ ihe dị mfe achọrọ nke slip. Robot dị iche iche nwere ọrụ dị iche iche, dị ka ígwè ọrụ nhicha nhicha, robot na-ehicha ala, ígwè na-ehicha ala, ígwè na-ehicha ọdọ mmiri na ígwè na-ehicha gutter, ma ha niile na-ekerịta obere ụdị na gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ, AOOD compact capsule slider ring contact with their Obere obere, ikike mgbaàmà dị elu na ọnụ ala, na-enwe ike izute robots ụlọ 'mkpa niile nke ngwụcha ogo 360 na-enweghị ngwụcha site na akụkụ ha edozi na akụkụ ntụgharị.